Xubin Muhiim ah oo ka Tirsan Jwxo-shiilada oo Xanuun la Ildaran – Rasaasa News
May 20, 2009 Jwxo-shiil
Waxaa laga hayaa Eebe Janadii ha geeyee Yusuf Xirsi Cilmi [dhoonyacab], in uu yidhi “saddex walee midna kuma hamiyo; Dadaal haween, Daris Midgaan iyo Dirir sokeeye”, murtidan mar ayaan kaligeed qalinka ku xardhi doonaa balse maanta waxaan ka raacaynaa ujeedada qormada.
Tan iyo intii uu khilaafka loo maarowaayey soo dhexgalay xubnaha Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], waxaa bilowday isu mindiyo lisasho, nacayb iyo xal la,aan, ilaa ay ugu dambayntii ku baxeen qaar ka mid dadkii bulshada ugu qiimaha badnaa. Arintan waxay kordhisay xaraaradii awal hore hoos loo dhigaayey ee lagu ixtiraamayey jiritaanka halganka Somalida Ogadeeniya.
Caabuq aan la celin karin baa cirka isku shareeray, ilmadu waxay dhabanadooda qoysay rag iyo haween, hurgumada ciilku ma han mid gumaysiga loo qabo, waa mid loo qabo ina walaal. Waxaa la waayey wax wax ka yidhaahda ama waanwaan ka gala xumaanta, waxaa lala kala hoyday calool xumo iyo kala waji qarsad, waxaa bilaabatay aflagaad duurxul ah, waxaa cidhiidhi galay wixii la isku haystay.
Waxaa aamusay oo afka gacanta saartay ninka loogu magacdaray Jwxo-shiil oo isagu guul u arkay gamawraca ina walaal, waxaa sidaasi si la mid ah sameeyey kuwii la moodayey in ay halganka u saaxiib yihiin. Waxay xaajadii halganku gunta u gashay qabiil, waa meeshii uu ka yidhi murtiilihii Somaliyeed Cali Faarax Goray “xil ninkuu dhibayey dhimay doqona halkan ayuu dhafoorada haystaa“.
Waxaa ruux walba meel cidla ah ku xidhay kalsooni daro, dad la,aan iyo cabsi, qaar waxay u jiifaan Isbitaalada xanuuno aan la garanaynin waxa ay yihiin. Waxaan isagu dhinacaba dhulka ka qaadi ninka lagu magacaabo Seedi oo xubin sare ka ah kooxda Jwxo-shiil, oo tan iyo intii uu gawraca xaqdarada ahi dhacayba aan isagu Isbitaal ka bixin. Waxaan la ogayn in uu calool nugayl dartii uu jidhkiisu hanan waayey xaqdarada uu shirqoolkeeda wax ka og yahay, ma waxbaa laggugu samayn darteed ayuu jidhka xanuun haleelay. Sida ay sheegeen dad ka ag dhaw waxaa uu xanuunkani u eg yahay dhiig kar iyo sonkor is biirsatay. Isaga oo kaliya ma ah dadka xanuunsan balse waxaa jira qaar kale oo ka tirsanaa Jwxo-shiilada oo aan Isbitaal galin laakiin aad iyo aad u xanuunsan oo jidhka oo dhan bararay waxaana ka mid ah baa la lee yahay ninka la yidhaahdo Abtidoon.
Waxaa faanfaan iyo wax ayna filanaynin ay faraha u soo galeen, falaagadii shacabka xabsiyada ka buuxiyey gacmahana u qabtay gumaysiga , waxaa qoomame taagan shacabka goomoon ee Somalida Ogadeeniya iyo kuwii xabsiyada ka dhex dagaalamayey. Waxaa ciil kaambi iyo Jaha wareer uu soo foodsaaray dadweynaha Somalida Ogadeeniya oo aan iyagu danahooda gaarka ah iloobay intii uu socday halganka ay wado Jwxo, waxaan shaki ku jirin in Jwxo-shiil uu helay hanti in ku filan oo uusan wareerba ku haynin duruufta soo wajahday halgankii aan ku daalay. Odhaah Somaliyeed baa odhanaysa ” Abeeso dhul u eki bay kugu dishaa, Habarina dad u eki, Jwxo-shiilna Ogaadeenimo“.
Hadii, ay in uun wax iga maqli lahaayeen ummada Somalida Ogadeeniya ee uu bineeyey gumaysigu in ay joojiyaan bilaawaha ay isu afaysanayaan, oo ay raacaan odhaahdii Ale u naxariisaygii Dhoonyacan waxaan nacay dirir sokeeye. Waxa in badan qoraal lagaga digay ayaa ku dangiigsaday halgankii Somalida Ogadeeniya, wuxuuna marayaa meeshii uu Maxamed Cali [Beenaleey] ka yidhi ” lada caanaheediyo anoo labanka fuudaaya Nimanbaa lalaba ii horkacay lulo colaadeede, Libbirba yaanankeenine hadaan kaa lug baxo maanta Walee aniga oo ladan Buslow kuguma soo laabto”.
Ciidamada Itobiya oo Dib u Galay Somaliya